Shir ay wada yeesheen Hay’ada German Agro Action(GAA) iyo Hay’ada SEEYO | Samatar's Weblog
Shir ay wada yeesheen Hay’ada German Agro Action(GAA) iyo Hay’ada SEEYO
May 27, 2008 at 9:48 am HALKAN RIIX
Shirkan oo ay ay ka soo qayb galeen mas’uuliyiinta Hay’ada German Agro Action(GAA) iyo Hay’ada SEEYO oo ku qabsoomay xurnta SEEYO ayaa ahaa mid ay muhimadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka u dhexeeya hay’ada German Agro Actio iyo SEEYO.
iyadoo ay hay’ada SEEYO wado mashruuc aad u balaadhan oo ku wajahan kaymaha iyo sidii dib u dhis loogu samayn lahaa meelaha dhirtu ka nabaad guurtay ee ku xeeran buuraha DAALO, CAL MADAW iyo SURUD.
ha’ada SEEYO oo lagu yaqaano dib u hagaajinta deegaanka iyo waxbarashada ayaa mar walba waxay la garab taagan hay’ada German Agro Action (GAA) wax walba oo taageero ah oo ay uga baahanyihiin.
waxa shirkan aan ka maqnayn isaguna Mr benham oo ah co-ordinatorka u fadhiya hay’ada (GAA) magaalada nairobi ee dalka Kenya, isagoo u rajeeyey labada hayadoodba in ay noqdaan mustaqbalka dhow kuwo aduunka oo dhan aad looga yaqaano .
waxa isaguna halkaa ka hadlay madaxa hay’ada GAA u jooga gobolka Sanaag Mr Daniel bronkal oo ay hadaladiisa ku dheehnaayeen muxubo iyo kalgacal uu u hayo dadka reer somaliland gaar ahaan magaalda aan joogo ee ceerigaabo ayuu yidhi.
isagoo hadalkiisii sii wata wuxuu yidhi hay’ada SEEYO maaha mid aan maanta baranayo ee waxaanu isnaqaanay benham ka hor, ha’ada SEEYO oo ah mid gobolka sanaag aad looga yaqaano ayuu yidhi waxaan rajaynayaa in hadaad dadaalkiina sii wadaan aad dhaafi doontaan hay’ado badan oo ka jira wadanka Germany oo aan sidiinaa wax u qaban ee iskaga magcaaban uun .
waxa ugu danbayntii soo gabagabeeyey shirkaa gudoomiyaha ururka SEEYO Nuura Ahmed Farah oo aad u soodhoweysay Mr benham guula u rajaysay labada hayadoodba .
MUUQAALKA LABADA WEFTI EE SEEYO & GAA
Mr daniel bronkal iyo Benham oo jooga xarunta waxbarashada ee SEEYO iyagoo waraysanya maamulaha dugsiga SEEYO Mr Salah A/rahman Jama
← Taariikh nololeedkii Farhan Mohamoud hidig (background)
dab maanta gelenkii hore ka kacay guri ku yaala magaalada ceerigaabo oo uu ku geeriyooday hal cunug laba kalena ku dhaawacantay →